जसपाको विवाद निर्वाचन आयोगले साउन ११ मा टुंग्याउँदै, कस्ले पाउला आधिकारिकता ? – Mission Khabar
जसपाको विवाद निर्वाचन आयोगले साउन ११ मा टुंग्याउँदै, कस्ले पाउला आधिकारिकता ?
मिसन खबर ७ श्रावण २०७८, बिहीबार २२:२३
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिकता विवाद केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदका सदस्यको हस्ताक्षरबाट टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार दोस्रो दिन दुवै पक्षको बहस सुनेपछि आयोगले कार्यकारिणी परिषदका सबै सदस्यलाई बोलाएर सनाखत मार्फत आधिकारिकता टुंगो लगाउने निर्णय लिएको हो।
प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले पार्टी एकता हुँदाका कार्यकारिणी परिषदका सदस्यहरुलाई साउन ११ गते नागरिकता वा सक्कल मतदाता परिचयपत्रसहित उपस्थित हुन आदेश दिइएको जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन आयोगले जसपामा दुवै पक्षको कारबाहीलाई अस्वीकृत गर्दै आधिकारिकता दाबीको कानुनी पत्राचारका लागि आह्वान गरे अनुसार अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले आफूले आधिकारिकता पाउनु पर्ने दाबीसहित बहुमत कार्यकारिणी परिषदका सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएको थियो । आयोगले साउन ३ गतेदेखि बिवाद समाधानको सुनुवाइ गर्दै आएको छ ।
जसपाको कार्यकारिणी परिषद्मा ५१ जना सदस्य छन्। यादव पक्षले आफूसँग उक्त समितिको ३० जना सदस्य र संघीय संसदका २१ जना सांसद रहेको दाबी गर्दै आएको छ। जसपाको आधिकारिकता कस्ले पाउँछ भन्ने चासो ४ दिनपछि मेटिनेभएको छ ।